Nicholas Kay oo Golaha Amaanka warbixin ka siiyey Soomaaliya “Waqti kasta weerar ayaa dhici kara” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ergayga Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya, Nicholas Kay ayaa warbixin ka dhiibay Soomaaliya, isagoo khadka Teleefoonka ee la iska arko uga qaybgalay kulan ay xubnaha golaha ammaanku ku yeesheen magaalada New York ee dalka Mareykanka, loogana hadlay xaaladda Soomaaliya.
Nicholas Kay ayaa ka hadlay xaaladda amaan ee dalka Soomaaliya, taasoo uu ka deyriyey, wuxuuna xusay in Alshabaaab Mudisho ka geystaan weeraro is-qarxin ah.
Danjiraha ayaa sheegay in xaaladda amaan ee Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho ay tahay mid walaac leh, isagoo soo hadal qaaday weeradii Alshabaab bishii hore ka geysteen Mudisho ee lagu bartilmaameedsaday Villaa Soomaaliya, kolonyo UN-ka ka tirsan iyo baar ku yaallay meel ku dhow KM0.
“Xaaladda ammaan ee Soomaaliya waa mid walaac uu ka tgaaagan yahay gaar ahaan Muqdisho, Al-shabaab waxay bishii lasoo dhaafay ka fulisay Muqdisho weerarro Ismiidaamin ah oo lagu bartilmaameedsaday qaar ka mid ah hay’adaha Qaramada Midoobay, madaxtooyada iyo maqaayad ku dhow xarunta nabadsugidda Qaranka ee Muqdsiho,” ayuu yiri Nicholas Kay.
Wuxuu sheegay Kay in mar kasta lafilan karo weeraro Alshabaab ku qaadan xarrumaha dowladda Soomaaliya iyo hay’adaha caalamiga ah “In weerarro lala beegsado dowladda Somalia iyo xubnaha caalamiga ah ee ka howl-gala Muqdisho waa kuwo mar walba la filan karo,” sidoo kale yiri danjire Kay.
Danjire Nicholas Kay ayaa qiray inuu jiri horumar, hase ahaatee wuxuu tilmaamay iney jiraan waxyaabo kale oo ku qasan “Horumarrada Soomaaliya ka socda waa kuwo isku qasan, balse horumar muuqda ayaa jira,” ayuu yiri Kay.
Ergayga UN-ka ayaa xusay in nabadda Soomaaliya u baahan tahay dhaqaale badan oo horay loogu sii wado, wuxuuna yiri “Nabad ku soo celinta Soomaaliya waxey u baahan tahay dhaqaale, waxaana beesha caalamka kula talinayaa inay ka dhabeeyaan ballanqaadyadii dhaqaale ee ay horay u bixiyeen.”
Danjiraha ayaa u sheegay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay in dowladda Soomaaliya iyo AMISOM diyaariyeen qorshe lagu sugayo amaanka caasimadda.
Wuxuu dhanka kale ka hadlay dagaallada hadda socda ee ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ku qaadeen meelo ka mid ah deegaanada Alshabaab maamulaan, wuxuuna xusay in Qaramada Midboobay kaalinteeda ka qaadatay diyaarinta howlgalkaan, islamarkaana raashin, shidaal iyo biyo ugu deeqday xafiiska UN-ka ee taageera AMISOM ee lagu magacaabo (UNSOA).
Wuxuu ka hadlay sida laga yeelayo meelaha laga saaro Alshabaab, wuxuuna tibaaxay in howlgalka milateri oo kaliya uusan amaan soo dabaali Karin, loona baahan yahay in deegaanada laga saaro Alshabaab loo sameynayo maamullo KMG ah oo ay dowladdu magacaabeyso, kaasoo uu sheegay in dowladdu qorshe howled qeexan u sameysay.
Danjiraha ayaa xusay in UNSOM si dhow ula shaqeyn doonto maamullada KMG ah ee dowladda Soomaaliya u dhiseyso dhulalka laga qabsado Alshabaab.
Warbxinta Danjire Kay khadka la iska arko uu ku siiyey Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kusoo beegantay xilli uu bilowday howlgal ka dhan ah Alshabaab oo ay ka qeybqqadanayaan AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya.